मिलन वि.सी.को लोक गित ‘घामको किरण’ सार्वजनिक (भिडियो सहित) – Waikhari
गृहपृष्ठ खबर मिलन वि.सी.को लोक गित ‘घामको किरण’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
मिलन वि.सी.को लोक गित ‘घामको किरण’ सार्वजनिक (भिडियो सहित)
सागर वि.क.(वैखरी अनलाईन) : पछिल्लो समय बजारमा नेपाली लोक गित संगित चर्चा परिचर्चामा रहेको छ । लोक दोहोरी गित सबै दर्शक स्रोताको नजरमा लोकप्रिय भन्दै गएका छन् । कति गितहरुले त करोड क्लव प्रवेश गरिसकेका छन् त कति गर्ने वाला छन् । लोक तथा दोहोरी क्षेत्रमा पछिल्लो समय मायाप्रेम र बिछोडले भरिएका गीतहरु दैनिकजसो बजारमा आईरहेका छन् । त्यसो त रमाईला, नचाउने किसीमका गीतहरुपनि बजारमा आईरहेका छन् तर बढिजसो मायाप्रेमका गीतहरु आउने गर्छन् कारण यस्ता गीतलाई दर्शकश्रोताले रुचाउछन् ।
सोहि क्रममा गायक मिलन वि.सी., शंकर वि.सी. र गायिका लक्ष्मी रेग्मीको स्वर रहेको लोक गीत ‘घामको किरण’ सार्वजनिक भएको छ । लोकप्रिय गायक एवम् सर्जक मिलन वि.सी.कोे आवाजमा रहेको गितमा गितकार एवम् सर्जक वि.सी. कै उत्कृष्ट लय शब्द सृर्जन रहेको छ ।
प्रेम भाव दर्शाईएको प्रेम कथालाई आधारित मानेर गीतमा नीकै उत्कृष्ट तरीकाले प्रस्तुत गरिएको छ । निकै मिठासपूर्ण शब्द र भावले सृजित गितमा विसीले चोखो माया गर्नेहरुले आफ्नो प्रेमको भाव एक अर्कामा कसरी प्रकट गर्छन् भन्ने कथाबस्तु चित्रण गरेका छन् । सर्जक विसीले केही लामो समयको अन्तरालमा यो म्युजिक भिडियो बजारमा ल्याएका हुन् । उक्त गितमा कृष्ण केसीको एरेन्ज रहेको छ । दशक बढीदेखि सांगीतिक क्षेत्रमा सक्रिय गायिक विसीका थुप्रै गीत रुचाइएका छन् ।
राज्यमन्त्री विमला वली भन्छिन्– मलाई फसाउने षड्यन्त्र भयो